Efa hisy ny fivezivezena be amin’ny taombaovao shinoa vao mandray matotra fisian’ny coronavirus-n’i Wuhan i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2020 5:39 GMT
Foibe shinoa fanarahamaso sy fisorohana aretina manoritra amin'ny fanazavana an-tsary fa tsy SARS ilay viriosy vaovao. Pikantsary an'efijery.
Nivoaka tamin'ny 22 janoary 2020 ny lahatsoratra ôrizinaly.
Hatramin'ny tapaky ny janoary no efa nivezivezy tao Shina ny tohon-tsofina fivakisan'ny viriosy izay tsikaritra voalohany ho tao afovoan-tanànan'i Wuhan [fr]. Tsy nanonona mihitsy ity viriosy (izay fantatra amin'ny anarana hoe coronavirus-n'i Wuhan) ity ny media sosialy shinoa raha tsy vao haingana noho ny lalàna henjana navoakan'ny governemanta foibe misahana ny fampielezana ‘vaovao faikany’.
Tamin'izay fotoana izay anefa olona an-tapitrisany no miomana handeha hitsidika ny fianakaviany manerana an'i Shina hanao vakansy, niakatra ny ahiahy amin'ny fielezany rehefa nohamafisina ny fiakaran'ny tranga ho avo telo heny ka lasa mihoatra ny 200.
Karazana viriosy vaovao ny coronavirus-n'i Wuhan izay mety hiteraka pneumonia izay mety hitarika mankany amin'ny fahavoazan'ny havokavoka (fisefoana). Tamin'ny 8 desambra 2019 no notaterina ho nisian'ny tranga voalohany; kanefa tamin'ny 30 desambra 2019 vao nanomboka niely an-tserasera ny dosie navoakan'ny manampahefana misahana ny fahasalamana ao Wuhan amin'ny fisian'ilay viriosy hafahafa. Tamin'ny 31 Desambra ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fahasalamana avy ao amin'ny Repoblika Entim-Bahoaka an'i Shina no nandeha nankany Wuhan hanadihady ny toe-draharaha. Nanomboka tamin'izay fotoana izay ihany ny seha-baovao shinoa vao nomena alalana hiresaka ny valan'aretin'i Wuhan.
Tamin'ny faran'ny desambra ny manampahefana no nilaza fisian'ny tranga miisa 27, ka ny fito amin'ireo no tena voa mafy. Ny ankamaroan'ireo marary miisa 27 izay tratra tamin'ny desambra ireo dia niasa ao amin'ny tsenan'ny sakafo izay ahitana varotra biby tsy fiompy. Nakatona ny tsena tamin'ny 1 Janoary. Etsy ankilany, tamin'ny 31 Desambra, nilaza ny manampahefana misahana ny fahasalamana ao Wuhan fa tsy mbola nandrakitra trangam-pifindran'aretina teo amin'ny samy olombelona ry zareo.
Raha azo heverina fa avy amin'ireo biby tsy fiompy no niaingan'ity viriosy ity, nisy ireo mpiserasera sasany nampifandray azy ity tamin'ny valan'aretina SARS tamin'ny taona 2003 izay nitarika ho amin'ny fahafatesan'olona miisa 774 tany amin'ny firenena miisa 37. Nisy ‘siosio’ ihany koa nipoitra an-tserasera fa tsy navahan'ny manampahefana misahana ny fahasalamana tao Wuhan ireo nahitana soritr'aretina madinika, ka lasa nisy ny fifindran'aretina teo amin'ny samy olombelona vokatr'izany.
Nanomboka namoritra an-tserasera amin'izay hitany ho mpanely siosion-dresaka ‘manakorotam-bahoaka’ ny manampahefana shinoa. Farafahakeliny 8 ny mpiserasera nampanantsoin'ny polisin'i Wuhan tamin'ny 1 Janoary 2020, raha maro ireo mpiserasera nahita ny kaontiny naato noho ny ‘fampielezana tsaho’.
Maro ireo mpiserasera tohina amin'izay hitany ho fanafenana ataon'ny manampahefana:
Manely ny siosion-dresaka ny olona satria tsy manazava izay nahatonga ny valan'aretina ny manampahefana, ahoana moa no ibedesanao olona amin'izany. Tsy manan-jo hiteny aho, tsy manan-jo hahalala ny marina aho ary tsy manan-jo na dia ny hanavotra ny tenako aza aho?
Tamin'ny 7 Janoary, nanamafy ny manampahaizana manokana ara-pitsaboana fa coronavirus vaovao no mahatonga ny pneomônian'i Wuhan izay tsy mbola tafiditra mihitsy tamin'ny vatan'olombelona tany aloha tany. Araka ny nolazain'ny vondrona siantifika shinoa iray, raha ny marina dia akaiky kokoa amin'ireo karazany izay hita amin'ny fanihy ilay viriosy raha oharina amin'ny SARS na MERS.
Tamin'ny 9 Janoary, niteraka famoizana ain'olona iray tao Wuhan ilay viriosy. Tamin'ny 13 Janoary, nanamafy fisian'ny trangan'ireo marary vao tany Shina i Japana sy i Thailandy.
Saingy mbola nanao ho laharam-pahamehana kokoa ny fifehezana ny fikoropahana noho ny fifehezana ny fielezan'ny aretina ny manampahefana shinoa misahana ny fahasalamana. Tamin'ny 18 Janoary, tamin'ny fanazavana an-tsary navoakan'ny Foibe shinoa fanarahamaso sy fisorohana aretina, nosoritan'ny governemanta fa tsy SARS ilay viriosy vaovao ary “voafetra ny fifindrany eo amin'ny samy olombelona”.
Milaza ireo Shinoa mpiserasera fa mahatsapa tsindry ry zareo ao amin'ny media sosialy mba tsy hisarihana ny fifantohana mankany amin'izay tranga vaovao. Mpisera iray no niteny fa voapaingotry ny raboto sy ireo tia tanindrazana an-tserasera tao amin'ny sehatra media sosialy shinoa Weibo rehefa nanamarika ny ahiahiny amin'ny toe-draharaha tao amin'ny randram-baovaony.
Tamin'ny 19 Janoary, nilaza ny ‘tsaho’ iray hafa fa mpiasan'ny fahasalamana vitsivitsy avy ao amin'ny hopitaly iray tao Guangzhou, faritany atsimo iray amorontsiraka, no tratran'ny coronavirus-n'i Wuhan, na dia nitsipaka ity tsaho ity tao amin'ny tranonkalany aza ny hopitaly. Nanamafy ihany koa ny solombavan'ny antoko komonista shinoa Global Times fa tsaho fotsiny ihany izany.
Tamin'ny 20 Janoary ny Fahitalavitra Foiben'i Shina niantsafa tamin'ny Dr. Zhong Nanshan, shinoa manampahaizana manokana momba ny aretin-tratra sy nahatsikaritra ny coronavirus SARS tamin'ny taona 2003, izay nanamafy fa mpiasan'ny fampitam-baovao miisa 14 no tratran'ny viriosin'i Wuhan, ary iray no voa mafy amin'izany.
Lasa lohahevitra malaza tao amin'ny sehatra media sosialy ny viriosin'i Wuhan. Nomena zo ihany nony farany ny vahoaka shinoa haneho ny ahiahiny omen-drariny momba ilay viriosy vaovao.